पुटिनलाई किन भेट्दै छन् किम ? – जीवनशैली
Home /अन्तर्राष्ट्रिय/पुटिनलाई किन भेट्दै छन् किम ?
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्दै छन् । यी दुई नेताहरुबीच पूर्वी चीनमा भेटवार्ताको सम्भावना रहेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरुको भनाई उद्धृत गर्दै कोरियाली समाचार संस्था योन्हापले बताएका हो । चीनमा अप्रिल २६–२७ मा आयोजना हुन लागेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग मञ्च’ सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा पुटिन चीन आउँदैछन् । सोही क्रममा चीनको पूर्वी क्षेत्रमा किमले पुटिनसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ ।
‘रुसी राष्ट्रपति पुटिन अप्रिल २४ मा चीनको पूर्वी क्षेत्रको भ्रमणमा आउँदै छन् । त्यही समयमा दुवै नेताबीच भेटवार्ता हुने सम्भावना छ ।’ समाचारमा भनिएको छ । मस्कोले भने किमसँगको भेटवार्ताबारेमा केही भनेको छैन । तर त्यहाँको सरकारी समाचार संस्था तासले मार्चमा क्रेमलिनका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै मस्को र प्योङयाङबिच किमको भ्रमणका विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै एक समाचार छापेको थियो ।
पछिल्लो समय दुवै देशका वरिष्ठ कुटनीतिक अधिकारीहरुको भेटघाट बाक्लिएको छ । किम जोङ–उनका अति निकट ठानिएका किम चाङ(सोनले गन मार्च १९ देखि २५ सम्म मस्को र भ्लाडिभोस्टकको भ्रमण गरेका थिए । यसै महीनाको शुरुमा रुसी गृहमन्त्री भ्लादिमिर कोलोकोच्सेभले पनि प्योङयाङको भ्रमण गरेका थिए ।
पुटिनले गत वर्ष मेमै किमलाई रुस भ्रमणको निम्ता दिएका थिए । तर उनको रुस भ्रमण भने हुन सकेको छैन । किम र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच फेब्रुरुअरीमा भियतनामको हनोईमा भएको शिखर वार्ता विफल भएपछि उत्तर कोरियाले रुससँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । राससरयोनहाप
TAGS: #Kim Jong Un #Vladimir Putin